BLBIO-V inoteedzera Fermenter ndiyo yekambani yedu yakasarudzika tsika bhakitiriya yekudzivirira michina: yakaiswa chisimbiso zvizere, zero kuvuza, hapana kusvibiswa, kuchengetedza-isina. Iwe unogona kufambisa mune yakasarudzika chisimbiso kana chisimbiso kaviri mechina chisimbiso system, kunyatsogadzirisa dambudziko rekusvibiswa kwebiological zvigadzirwa tank tsika. Fermentation yema paramita akasiyana akadai, pH, DO, tembiricha nekumhanyisa kunogona kutariswa neanodzora, data rese uye parameter yekutonga inogona kupfuudzwa kune inodzora kana komputa. Chimiro chekombiki, zvikamu zvakasiyana zvinogona kubatanidzwa pane iyo Fermentation system. Mutyairi wepamusoro anokwanisa kusarudza kushandisa zvakananga kusanganisa michina inosimudzira kana kuderera kutyaira magirinari zvisina kubatanidzwa nenzira yekumakanika kusanganisa, chimiro chiri nyore, kushanda kwakasimba.